गायक बबिन प्रधानलाई हैरान पार्ने २८ वर्ष पुरानो चर्चित गीत :: Setopati
प्रभाकर गौतम काठमाडौं, साउन १७
गायक बबिन प्रधान
गायक बबिन प्रधान आफ्नो पहिलो एकल एल्बमको तयारी गर्दै थिए। सन् १९९२ जुलाई ३१ को दिन उनले एउटा दुःखद खबर सुने। खबर, नेपाली इतिहासकै एउटा ठूलो विमान दुर्घटनाबारे थियो।
बैंकक अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट उडेको थाई एयरवेजको जहाज काठमाडौं आउने क्रममा लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज नजिकको डाँडामा ठोक्किँदा ११३ जनाको मृत्यु भएको थियो। ९९ यात्रु र १४ चालक दल सदस्य सबैको निधन भयो।
टेलिभिजन, रेडियो र पत्रपत्रिकामा धेरै दिनसम्म त्यो दुर्घटनाको समाचारले प्रमुख स्थान पायो। धेरैले आफन्तहरू गुमाएको त्यो राष्ट्रिय शोकको घटनाले बबिन र उनका साथीहरूलाई समेत शोकाकुल बनायो। अबिराम परेको त्यो दिनको झरीको संगीत उनीहरूलाई अप्रिय लाग्यो।
त्यसबेला संगीतकार नवदीप राजभण्डारी र विष्णु श्रेष्ठ पनि बबिनकै नयाँ एल्बमको तयारीमा थिए। उनीहरूले अभ्यास गरिरहेको गीतमा धेरै दिनसम्म काम गर्न सकेनन्। नेपाल टेलिभिजनको पर्दामा क्षतविक्षत लास र आफन्तका आँसुले उनीहरूलाई पनि शोकाकुल बनायो। उनीहरूले संगीतमार्फत जहाज दुर्घटनामा निधन भएका परिवार र आफन्तलाई श्रद्धाञ्जली स्वरूप सोही एल्बममा एउटा गीत समावेश गर्ने निर्णय गरे।
श्रद्धाञ्जली दिन बनाइएको त्यो गीत थियो, 'झरी परेको दिन'।
यो गीत 'बबिन प्रधान १९९३' एल्बममा समावेश भएर सार्वजनिक भयो। गीत यति रूचाइयो, आज पनि झरी परेको दिन बबिनलाई चिनाउने गीत बनेको छ।
हरेक वर्ष झरी परेको मौसममा यो गीतको माग ह्वात्तै बढ्छ। तपाईंहरूले पनि हरेक वर्खामा यो गीत धेरै पटक दोहोर्‍याएर सुनिसक्नुभयो होला!
हाल कुलेश्वरमा बस्ने गायक बबिनसँग हामीले यही गीतसँग जोडिएको २८ वर्ष पुरानो सन्दर्भबारे कुराकानी गर्‍यौं। गीतबारे उनले भने, 'मैले धेरै हिट गीत गाएँ। तर आज पनि अरूभन्दा झरी परेको दिनकै चर्चा बढी हुन्छ। श्रद्धाञ्जली दिन बनाइएको गीतलाई स्रोताले मन पराइदिनु मेरो कामको सफलता हो।'
दर्शक होइन, स्रोता मात्र। यसको म्युजिक भिडिओ बनेको छैन। उनी भन्छन्, 'तर यो यति चर्चित भयो, हरेक स्रोताको दिमागमा आफ्नै कल्पनाअनुसारको दृश्य बनेको छ।'
हो पनि, बबिनले सन् १९८९ मा गाएको पहिलो गीत 'प्रियसीको मन जित्न'ले नै विशेष चर्चा पाएको थियो। एकल एल्बम निस्कनुअघिका अन्य केही फुटकर गीत पनि रूचाइएका थिए। बबिनका 'टाढा', 'झलझली सम्झना', 'ए माया', 'मेरो साथीहरूको माझ' विशेष चर्चित गीत हुन्।
झरी परेको दिन गाउने बेलासम्म उनले माया-प्रेमभन्दा परको विषयमा गाएका थिएनन्। त्यसैले यो गीत गाउन हच्किएका थिए। संकोचकै कारण प्रियसीको मन जित्न पनि एक वर्ष ढिलो रेकर्ड गराएको उनी बताउँछन्। पहिलो गीतजस्तै झरी परेको दिन सार्वजनिक हुने बेला केही दिन घरै लुकेर बसेका रहेछन्।
उनले सम्झे, 'जब धेरै साथीहरूले सुनेर प्रशंसा गरे, बल्ल घरबाहिर निस्कने आँट आयो।'
उनका अनुसार प्रियसीको मन जित्नले गायक बन्न आत्मविश्वास दियो। झरी परेको दिनले अरूको नजरमा पनि राम्रो गायक बनायो। बबिन यसका रचनाकार पनि हुन् जुन संगीतकार नवदीप राजभण्डारीसँग मिलेर लेखेका हुन्।
त्यसबेला बबिन, नवदीप र विष्णु श्रेष्ठको सहकार्य खुब जमेको थियो। उनीहरू नवदीपको लाजिम्पाटस्थित कोठामा गीत-संगीतबारे दिनरात अभ्यास गर्थे। बबिनका धेरै गीत विश्वदीपकै कोठामा रेकर्ड भएका हुन्। उनीहरू मध्यरातको सन्नाटामा झ्यालढोका मज्जाले लगाएर रेकर्ड गर्थे।
'झरी परेको दिन पनि चकमन्न मध्यरातमा नवदीप दाइको घरमा रेकर्ड गरिएको थियो,' बबिनले भने।
यो गीत वास्तविक घटनामा आधारित भएकाले उनीहरूका लागि चुनौतीपूर्ण काम थियो। आकाशमा टम्म बादल लागेर रन-वे लाइन नदेखिँदा विमान दुर्घटना भएको समय र परिवेशलाई थोरै शब्दमा कैद गर्नुपर्ने थियो। आमा, बुबा, श्रीमान, श्रीमती, दाजुभाइ, दिदीबहिनी र सन्तान गुमाएका आफन्तजनको पीडाभाव पनि समात्नु थियो। अझ प्रेमगीतको दबदबा रहेका बेला अलि फरक खालको गाउनु बबिनका लागि दुस्साहस नै थियो।
फरक खालको काम भएकाले होला, गीतको कम्पोजिसनमा पनि नयाँपन दिने प्रयास गरियो। संगीतकार नवदीपले मुखडा-अन्तराको ढर्रामा थोरै परिमार्जन गर्दै 'ब्रिज' शैलीमा कम्पोज गरे। नतिजा, यसको शब्द, संगीत र गायकीले स्रोतालाई समेत भावना र सिर्जनाको यात्रामा उडाउन सफल भयो। 'पहाडको माझमा एक्कासि झस्क्यौ होला...' भन्ने बेला स्रोताहरू पनि झस्किए।
त्यो बेला 'बबिन प्रधान १९९३' सर्वाधिक बिक्री हुने एल्बम बन्नुमा यही गीतको लोकप्रियता मुख्य आधार बन्यो। उनले नेपालभित्रका धेरै ठाउँमा यो गीत गाए। विदेशमा पनि सबभन्दा धेरै यही गाउनुपरेको उनी सुनाउँछन्। उनलाई हरेक कार्यक्रममा यो गीत नगाइ सुखै छैन।
यसको चर्चाले बबिनलाई जति खुसी दिएको छ, उत्तिकै हैरान पनि बनाएको छ।
चर्चासँगै त्यो जहाज दुर्घटनामा बबिनकी प्रेमिकाको पनि निधन भएको र उनैलाई श्रद्धाञ्जली दिन यो गीत बनाएको हल्ला फैलियो। झट्ट सुन्दा एक प्रेमीले प्रेमिकाप्रति समर्पित गरेजस्तो भएकाले पनि यस्तो लागेको हुनसक्ने बबिन बताउँछन्।
'यो तपाईंको आफ्नै कथा हो?'
धेरैले सोध्ने यही प्रश्नको उत्तर 'होइन' भनेर जवाफ दिँदा-दिँदा उनी थाकिसके। तर उनलाई सबैभन्दा प्रिय लाग्ने गीत यही हो।
हरेक वर्ष फर्की आउने झरीले बबिनलाई पनि नोस्टाल्जिक बनाउँछ। यो गीतप्रतिको मोहका कारण उनले यसलाई पुनः रेकर्ड पनि गरेका छन्। यो पहिले फोर ट्रयाक स्पूल टेपमा रेकर्ड भएको थियो। अहिले प्रविधि राम्रो भएकाले फेरि रेकर्ड गरिएको उनले बताए।
महामारी र लकडाउन नभएको भए यसको नयाँ भर्सन भिडिओसहित जुलाई ३१, अर्थात् हिजो शनिबार सार्वजनिक हुने थियो।
कुनै बेला भने उनले यसको भिडिओ बनाउन आएका प्रस्तावहरू टारेका थिए।
'हाम्रो समयमा गीत स्रोतासम्म पुग्न भिडिओ अनिवार्य थिएन। नयाँ रेकर्ड चाहिँ भिडिओ समेत बनाउने भनेर काम सुरू गरिसकेका थियौं,' बबिनले भने, 'महामारीले जुरेन। समय अनुकूल भएपछि नयाँ स्वादसहितको झरी परेको दिन लिएर आउनेछु।'
यो पनि पढ्नुहोस्ः यसरी बनेको थियो हरिवंशको चर्चित गीत 'हाम्री आमा साह्रै नै बाठी छन्'
प्रकाशित मिति: आइतबार, साउन १७, २०७८, १९:५६:००
लिम्बुवानको ऐतिहासिक दस्तावेज संग्रह इ‌ङ्नामलाई मदन पुरस्कार, थापालाई जगदम्बाश्री
नेपाल-युरोपियन युनियन फिल्म फेस्टिभलमा 'ग्रीन फिल्म मेकिङ' मास्टरक्लास हुने